Iswiidhan oo ciidamo milatari u dirtay dalka Maali - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Iswiidhan oo ciidamo milatari u dirtay dalka MaaliFoto:Mohammad Sajjad/TT.
Iswiidhan oo ciidamo milatari u dirtay dalka Maali
La daabacay måndag 19 januari 2015 kl 15.36
Maalintii jimcaha ahayd waxa waddanka Maali ka degay askartii ugu horraysay ee Iswiidhish ah ee halkaasi u tagta si ay uga qaybqaataan hawlgalada ay waddo qaramada midoobay. Askartan Iswiidhishka ah ayay sugaysaa hawl badani, waxaanay inta badan ka shaqayn doonaan arrimaha sirdoonka.
Taliyaha ciidamada Iswiidhishka ah ee loo diray waddanka Maali Carl-Magnus R Svensson ayaa isaga oo hawlgalkan ka hadlaya waxa uu yidhi:
- Waxa aanu gacansiin doonaa qaramada midoobay, waxaananu ka caawin doonaa hawlaha milatariga iyo waliba dhanka sirdoonka. Si loo badbaadiyo dadka shicibka ah.
Hadda waa markii ugu horraysay ee ay Iswiidhan ciidamo milatari u dirto dalka Maali, iyada oo muddo 10 sanno ah qayb ka ahayd hawlgalada milatari ee ay qaramada midoobay waddo. Hawlgalkii u weynaa ee caalami ah ee ay Iswiidhan ka qaybqaadato waxa uu ahaa hawlgalkii militari ee uu isbahaysiga Nato hoggaaminayay ee laga fuliyay dalka Afgaanistaan. Kaasi oo ay ciidamada Iswiidhanku ka qayb galeen dagaaladii dalkaasi ka socday, laakiinse hawgalkan ciidamada Iswiidhishka ah loogu diray dalka Maali waa mid kaa ka duwan, waxaanu noqon doonaa mid ay ciidamadu dalkaasi ka caawin doonaan dhanka sirdoonka. Waxaanay ciidamadan shaqadoodu noqon doontaa sidii ay wakhti fiican u heli lahaayeen xogta cadowgooda, si ay u badbaadiyaan shacabka iyo waliba ciidamada qaramada midoobay.
Ciidamadan ayaa bishii noofambar ee sannadkii 2014 saldhig ka samaystay meel u dhaw magaalada Timbuktu, laakiin se maalintii jimcihii uun bay ciidamo tiradoodu 70 askari halkaasi gaadheen, waxaana la rajaynayaa in tirada ciidamadaasi ay bisha maarso gaadhi doonto 250 askari.
Waa kan mar kale taliyaha ciidamada Iswiidhishka ah ee loo diray waddanka Maali Carl-Magnus R Svensson oo ka waramaya waxyaabaha ay gacanta ka siindoonaan qaramada midoobay:
- Waxa aanu aaminsannahay in aanu gacan weyn ka gaysan doono hawlgalada dib u dhiska ah ee ay qaramada midoobay waddo. Annaga oo u fududayn doonna dhanka sirdoonka. Ciidamada qaramada midoobay ayaa qaban doona wixii hawlgalo milatari ah, waxa se aanu aad uga gacansiin doonaa dhanka xogta ah.
Xaaladda nabadgalyada waddanka Maali ayaa aad u xumaatay sannadkii 2014, waxaana sii adkaaday hawlgaladii ay qaramada midoobay ka wadday dalkaasi. Hawlgalkan oo loo yaqaano Minusma ayaa ahaa mid ay ka qaybqaateen 9000 askari, kaasi oo ay ujeeddadiisu ahayd sidii loo soo celin lahaa nabadda iyo kaladanbaynta dalka Maali, lana sugi lahaa ammaanka shacabka iyo waliba sidii ay dawladdu gacanta ugu wada dhigi lahayd dalka oo dhan.
Tan iyo markii ay hawgaladani ka bilowdeen dalka Maali, sannadkii 2013, waxa qaramada midoobay dalkaasi kaga dhintay 30 askari. Marka laga yimaaddo dilalka iyo weerarada loo gaystay ciidamada qaramada midoobay ee dalkaasi ku sugan, waxa uu hawlgalkani noqonaysaa mid ka mid ah kuwii ugu khatarta badnaa ee ay qaramada midoobay fuliso. Sidaasi waxa tidhi Emma Skeppström oo ah sarkaalad ka tirasan waaxda siyaasadda ammaanka ee wasaaradda gaashaandhiga Iswdiidhan.
- Ma jirto waxa heshiis nabadeed ah oo dalka ka jiraa, taasina waxa ay sii adkaynaysaa in ay qaramada midoobay hawsheeda qabsato. Waxaa sidoo kale adag xidhiidhka dawladda. Maxaa yeelay dawladdu ma haysato awood ay ku maamusho dalka, waxna kaga qabato dhibaatada dalka ka jirta. Taasina waxa ay keentay in ay ciidamada qaramada midoobay la kulmaan xaalad adag oo dhanka ammaanka ah iyo in ay hawshooda qabsadaan.
Ciidamada Iswiidhishku waxa ay ka hawlgali doonaan dhanka waqooyi galbeed ee waddanka Maali, meel u dhaw magaalada Timbuktu. Waxaanay taasi ka dhigan tahay in ay xaaladdo badani oo adagi ka hor iman doonaan ciidamada Iswiidhishka ah. Sida dhanka ammaanka, dhanka caafimaadka oo laga yaabo in ay xanuuno ku dhacaan iyo waliba dhibaato ka soo gaadha dhanka cimilada kulul ee dalkaasi ka jirta. Mar kale waa kan Taliyaha ciidamada Iswiidhishka ah ee loo diray waddanka Maali Carl-Magnus R Svensson oo arrintaasi ka hadlayaa:
- Xilliyada xagaagii dalka Maali waxa uu kulaylku gaadhaa 45 digrii oo kulayl ah, waxaanay taasi saamayn ku yeelan doontaa askarta iyo waliba qalabka ay wataan. Waxaanu u soo diyaargarownay xaaladaha adag ee ay cimiladu keento. Waxaanu ku soo tababaranay waqooyiga Iswiidhan oo ah meel aad u qabow, waxaanu sidoo kale ciidamadayada ku soo tababarnay goobo aad u kulul oo aanu ugu talogalnay inay isu sii diyaariyaan cimilada dalka Maali.
Taliyaha ciidama Carl-Magnus ayaa sidoo kale sheegay in ay ciidamada Iswiidhishku tababar fiican sii sameeyeen xagaagii hore.
- Waanu samaynay tababaro badan. Hawlgalada aaanu ka fulin doono dalka Maali, waxaanu ku sii jilcinay Iswiidhan gudaheeda. Waxaanu sidoo kale samaynay tababaro gaar gaar ah oo xitaa la xidhiidha dhanka nadaafadda hubka iyo waliba caafimaadka.